Shaqooyinka sayidka Alejandro Obregón | Safarka Absolut
Alejandro Obregon waxaa loo tixgeliyaa sida mid ka mid ah ranjiyeyaashii waaweyn ee Isbaanishka ee qarnigii XNUMXaad. Abuuritaankiisa muddo dheer ayaa lagu amaanay hal-abuurnimada muuqaalka ah ee ay keeneen iyo mawduuca shaqadiisa, kuwaas oo had iyo jeer wax ka qabta arrimaha muranka dhaliyay.
Obregón wuxuu ku dhashay Barcelona, ​​Spain) sanadkii 1921. Sikastaba, isagoo 6 sano jir ah ayuu aaday inuu dego wadankii aabihiis, Colombia, oo ay weheliyaan inta kale ee qoyskiisa. Dhalinyarnimadiisa waxaa lagu calaamadeeyay joogitaan dheer oo labada dal ah iyo sidoo kale safaro badan oo uu ku tagay Mareykanka, Faransiiska iyo Ingiriiska.
Tababarkiisa faneed wuxuu ka dhacay Iskuulka Farshaxanka Fiican ee Boston iyo Llotja ee Barcelona. Ku habsaday saameyn badan oo dhaqan iyo farshaxan oo reer Yurub ah, wuxuu aakhirkii degey magaalada Cartagena de India. Halkaas, Obregón wuxuu saaxiib la noqday fanaaniin reer Colombia ah sida Ricardo Gomez Campuzano, Enrique Grau, Santiago Martinez ama Kolombiya-Jarmal ah William Wiedemann. Qaar iyaga ka mid ah ayuu si dhow ula shaqeeyey oo bilaabay inuu horumariyo qaabkiisa.
Isaguba wuxuu xubin ka ahaa waxa loogu yeero Kooxda Barranquilla, kaasoo kulmiyay fanaaniintii waaweynaa ee reer Colombia iyo waxgaradkii bartamihii qarniga.
Kondhiga waa mid ka mid ah ujeedooyinka soo noqnoqda ee inbadan oo ka mid ah sawirada Alejandro Obregón
Markuu jiray da'da 24, Alejandro Obregón wuxuu bilaabay in loo aqoonsado qaran ahaan kaqeyb galkiisa V Salonka Qaranka ee Fanaaniinta Colombia, 1944, helitaanka dib u eegista ugu fiican. Sannado ka dib, ka dib safar uu ku tagay bartamaha Yurub, wuxuu xoojiyay qaabkiisa wuxuuna noqday wakiilka ugu sareeya ee hada muujinta tusaalaha ah ee dhulka Mareykanka.
Noloshiisa gaarka ah wuxuu u istaagay guurkiisa rinji-yahanka Ingiriiska Freda sargent, oo uu ku guursaday Panama. Goor dambe ayuu furay inuu dib u guursado, markan qoob ka ciyaarka Sonia Osorio, aasaasihii Ballet de Colombia. Iyada iyada wuxuu lahaa wiil, Rodrigo Osorio, oo ah jilaa caan ah iyo jilaa telefishan. Jacaylka xawaaraha iyo orodka baabuurta sidoo kale wuxuu ahaa mid joogto ah noloshiisa.
Sawir-qaade sawir gacmeed laga soo qaaday 50-yadii, irdaha quduuskadhigidda Alejandro Obregón oo ahaa farshaxan weyn oo reer Colombia ah qarnigii XNUMX-aad.
Badhtamihii 70-meeyadii wuxuu noqday agaasimaha Matxafka Farshaxanka casriga ah ee Bogotá.
Alejandro Obregón wuxuu ku dhintay magaalada Cartagena sanadkii 1992, isagoo ka tagay dhaxal farshaxanimo cajiib ah oo lagu soo koobi karo mid ka mid ah milicsigiisii ​​ugu caansanaa:
«Ma aaminsani in iskuulada rinjiyeynta; Waxaan aaminsanahay rinjiyeynta wanaagsan iyo wax kale. Rinjiyeynta waa muujinta shaqsi waxaana jira u janjeera shakhsiyaad. Waan ku qancay rinjiyeyaasha wanaagsan, gaar ahaan kuwa Isbaanishka, laakiin waxaan u arkaa in midkoodna uusan saameyn ku yeelan tababarkayga ».
Shaqooyinka ugu fiican
Halkan waxaa ah muunad kooban laakiin wakiil matalaya shaqooyinka waaweyn ee Alejandro Obregón. Xullo sifiican ugu habboon qaabkiisa gaarka ah iyo luqadda farshaxanka:
Buugga Buluugga ah (1939) waa mid ka mid ah shaqooyinkii ugu horreeyay ee farshaxan-yahanka, lana sameeyay markii uu jiray 19 sano. Waxay ka tarjumaysaa Alejandro Obregón markii ugu horreysay ee uu ku soo biirayo adduunka sawir gacmeedka 'avant-garde'. Sannado ka dib wuu pnitaría Sawir gacmeed (1943), oo ah shaqo uu ku caanbaxay goobihii farshaxanka weynaa ee Isbaanishka.
Horraantii 50-meeyadii, qaabka Obregón wuxuu gaadhay qeexitaankiisa iyo bislaanshihiisa. Saameyn ku yeeshay el Cubism, sayidku wuxuu sameeyay halabuurro mucjiso leh oo isku dheelitiran oo aan ka dheehan karno Albaabo iyo meel bannaan (1951) Weli nolosha jaalaha ah (1955) iyo Greguerías iyo chameleon (1957).
Violencia (1962), waa shaqadii aasaasay Alejandro Obregón oo ah rinjieyaha ugu saameynta badan Colombia qarnigii XNUMXaad
Bisaylku ka dib wuxuu yimid daahirinta, tobankii sano ee 60. Alejandro Obregón wuxuu noqday rinjiile ugu muhiimsan dalka, iyadoo la siiyay ilaa laba jeer abaalmarintii ugu horreysay ee Rinjiyeynta ee Hoolka Qaranka. Shaqooyinka ku kasbaday isaga aqoonsi noocaas ah waxay ahaayeen Rabshad (1962) iyo Ikarus iyo xashiishka (1966). Shaqooyinka kale ee aadka u wanaagsan ee xilligan jira ayaa ah Markab Burburay (1960) Saaxiibka Kaaribiyaanka (1961) Ku ammaano Gaitán Durán (1962) iyo Gujis Volcano ah (1965).
Qaar ka mid ah sawirada Obregón waxay leeyihiin nuxur bulsheed iyo cabasho weyn. Ardaygii dhintay y Baroorta ardayga, labadaba laga soo bilaabo 1957, waxay u adeegeen inay cambaareeyaan afgembigii Gustavo Rojas Pinilla. Sawirkiisa, diiqdu waa matalaadda maldahan ee kaligii taliyihii.
Marxaladiisii ​​ugu dambeysay, Alejadro Obregón wuxuu si tartiib tartiib ah uga tagey farsamadii saliida ee ahayd rinjiyeynta akril. Tani waxay u horseeday isaga oo yar yar inuu ku carbisto rinjiyeynta dusha sare sida dhismayaasha dhismaha oo uu iska ilaawo shiraacyada dhaqanka. Cajiibkan leh rinjiyeynta Waxay u horseedday inuu ku sameeyo shaqooyin aqoonsi weyn ah meelaha astaanta u ah sida dhismaha Golaha Guurtida ee Jamhuuriyadda ama Maktabadda Luis Ángel Arango.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Shaqooyinka sayidka Alejandro Obregón
Shuqulladiisu waa yaabab
Ku jawaab sarita
sawiro qurux badan oo la sameeyay
Ku jawaab Maria Eperanza
Waxaan ku iibinayaa boodhadhkan asalka ah midkiiba $ 50.000 (CONDOR) SIZE PAPER OO LAGA HELAY
KOOWAADAYAASHA TEL 2767321 BOGOTA
Jawaab JORGE SAENZ
maria cecilia jiiday basilio dijo
dabcan wuxuu ku noolaa noloshiisa isagoo qaas ah oo caan ku ah shuqulladiisa hambalyo qoyskiisa
Jawaab maria cecilia tirado basilio
narrarvaes casaan ah dijo
Q XIISO CAJIIB AH
Ku jawaab rosa narrarvaes